शीर्ष नेतालाई प्रश्नः किन लुक्यो रअ प्रमुखको भेट ? (भिडियो ब्लग), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
टेकनारायण भट्टराई , ८ श्रावण २०७६
काठमाडौँ । हाम्रा कुनै नेता, बुद्धिजीवी वा पत्रकारलाई भारतीय दलाल वा रअको एजेन्ट भन्यो भने उसका लागि त्यो भन्दा ठूलो अर्को कुनै गाली हुँदैन। रअ, अर्थात भारतीय गुप्तचर संस्था, जसको पूरा नाम हो- रिसर्च एण्ड एनालाइसिस बिङ।
हरेकजसो मुलुकमा आफ्नो देश र नागरिकको हित, राष्ट्रिय महत्वका दस्ताबेज र गोप्य सूचनाहरूमा काम गर्ने निकै शान्त तर चलाख संयन्त्र हुन्छ। त्यो संयन्त्र र त्यसमा काम गर्नेहरूको शैली सामान्यतया आम मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यो संस्थाले अर्काको देशको हित हेर्दैन, कसरी अर्को देशमा आफ्नो देशको प्रभाव बढाउने, अर्को देशलाई आफूभन्दा कमजोर बनाउन दाउपेच गर्ने र गोप्य सूचना र दस्ताबेजहरू हत्याएर त्यसमाथि खेल्ने काम गर्छ। जस्तो कि अमेरिकाको सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए), चीनको मिनिस्ट्री अफ स्टेट (एमएसएस), भारतको रअ, पाकिस्तानको आइएसआइलाई उदाहरण मान्नुस्।
अहिले भारतसँग जोडिएको अर्को विषय पनि निकै चर्चामा छ। भारतीय दूतावासले नेपालका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग भेटघाट गरे लगत्तै महिला सांसदहरूलाई दूतावासमै बोलाएर अन्तरकृया गरेको छ।
जासुस संयन्त्र कति घातक हुन्छन् भन्ने बुझ्नका लागि सिक्किमको उदाहरणलाई नै लिन सकिन्छ। भारतमा सिक्किम विलय गराउन रअको भूमिका निकै प्रभावकारी मानिन्छ। छिमेकी मुलुकमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअको भूमिका सन् १९६८ मा यसको स्थापना भएदेखि नै डरलाग्दो स्थितिमा छ। भारतको रअ र पाकिस्तानको आइएसआइको भूमिकाबारे थुप्रै किस्सा सुन्नु भएकै होला र हिन्दी फिल्म पनि हेर्नु भएकै होला।
यति बुझ्नुस् कि अर्को देशको खुफिया एजेन्सी कुनैपनि देशमा घुस्छ भने त्यो अशुभ जस्तै मानिन्छ। भारतमा आइएसआईको कुनै अधिकारी भेटियो र पाकिस्तानमा रअको अधिकारी यदि भेटियो भने उसको के हालत हुन्छ त्यो कुरै नगरूँ। कामको प्रकृति नै लुकिचोरी गर्ने भएकोले यस्ता खुफिया एजेन्सीका मान्छेहरूले छद्म भेषमा र गोप्य शैलीमा काम गर्छन्।
यस्तै गुपचुपमा नेपाल आएर तीनदिन बसेर हाम्रा शीर्ष नेता भेटेर रअका नवनियुक्त प्रमुख सामन्त कुमार गोयल भारत फर्केका छन्। उनको नेपाल भ्रमण थप रहस्यमयी बनाएका छन् हाम्रै नेताहरूले।
अब आउनुस् हाम्रो घरेलु राजनीतिमा रअको माइक्रोम्यानेजमेन्ट र राष्ट्रवादको डकार छाड्ने हाम्रा नेताहरूले बिर्सेको आफ्नो मर्यादाको कुरा गरूँ। कुरा गहिरोसँग बुझ्नुस् है, रअसँग नाम जोडेको पटक्कै नसहने, नचाहने तर गुपचुपमा रअका मान्छे भेट्न मरिहत्ते गर्ने यो जस्तो नालायक चरित्र के हुन सक्छ? अझ राष्ट्रिय जीवनमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने शीर्ष नेताहरूले गुपचुपमा रअका मान्छे भेट्छन् भने, त्यसको मतलव के हुन्छ? त्यो देश र जनताका लागि सरासर गद्दारी हो। यदि शिष्टाचारका लागि गरिएको भेट हो भने लुकाउनु किन? ती भेटहरू राष्ट्रिय रेकर्डमा रहनुपर्छ र भेटहरू परराष्ट्र नीति अनुकुलका हुनुपर्छ।
रअका प्रमुखको नेपाल भ्रमण निकै रहस्यमयी बनाइएको छ। हाम्रो सरकार, हाम्रा पार्टी र नेताहरू कतिसम्म अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार छन् भन्ने नमूना रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमण प्रकरणमा पनि फेरी एकपटक उदाङ्गो भएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरका मान्छे भेटेको भनेर हल्लाखल्ला हुँदा त्यसको आधिकारिक जानकारी वा खण्डन आएको छैन। सरकार नेतृत्व गरेको दलका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री र अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री भनिएका प्रचण्डको त के कुरा भयो र? उनको निवासमै गाडीको लस्कर लगाएर रअ प्रमुखसहितको टोली पुगेको गाडि सहितका तस्बिर र समाचार आएका छन्। सरकार नेतृत्व गरेको दलका एक अध्यक्षले गरेको यो भेट अर्थपूर्ण छ। प्रचण्डले ओलीको जानकारीमा यो भेट गरेका हुन् भने बेग्लै कुरा भयो, तर जानकारीविना नै भेट गरेका हुन् भने झनै शङ्कास्पद र रहस्यमयी मान्नुपर्छ। यसका परिणाम के के हुनसक्छन् कुर्नै पर्छ। तर अहिलेका लागि यस्ता भेट किन गरिन्छ र किन लुकाइन्छ भन्ने प्रश्न जनताको तहबाट गर्नै पर्ने हुन्छ। भेटबारे प्रचण्डले जनतालाई कुनै जवाफ दिन किन मानेका छैनन्? किन उनी यो भेट लुकाउन चाहन्छन्?
रअसँग नाम जोडेको पटक्कै नसहने, नचाहने तर गुपचुपमा रअका मान्छे भेट्न मरिहत्ते गर्ने यो जस्तो नालायक चरित्र के हुन सक्छ? अझ राष्ट्रिय जीवनमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने शीर्ष नेताहरूले गुपचुपमा रअका मान्छे भेट्छन् भने, त्यसको मतलव के हुन्छ? त्यो देश र जनताका लागि सरासर गद्दारी हो। यदि शिष्टाचारका लागि गरिएको भेट हो भने लुकाउनु किन? ती भेटहरू राष्ट्रिय रेकर्डमा रहनुपर्छ र भेटहरू परराष्ट्र नीति अनुकुलका हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भेट इन्कार गरेको बताइएको छ। यदि त्यसो हो भने यो मामलामा प्रधानमन्त्री सजग देखिन्छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुछेर समाचारहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भेट इन्कार गरेको भएपनि किन प्रष्ट भन्न सक्दैन? अपारदर्शी व्यवहारले शङ्का बढाएको छ।
प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा त भारतीय दूतावासमै पुगेर भेट गरेको खबरहरू मिडियामा आएका छन्। उनले पनि भेट भएको पनि भनेका छैनन्, नभएको पनि भनेका छैनन्। नाथे जनतालाई के भनिरहनु पर्यो। भोट दिनेबेला यस्ता कुराको हिसाब किताब राख्ने जनता भए पो डराउनु। कि कसो?
सम्पादकहरूसँगको भेटको तस्बिर भारतीय दूतावासले सार्वजनिक गरेन तर महिला सांसदसँगको भेटको तस्बिर भारतीय राजदूत मन्जिभ सिंह पुरीले ट्विटरमा सार्वजनिक गरे। राष्ट्रिय जीवनमा प्रभाव पार्ने नेता वा जो कोहीको एकल भेटहरू त कति कति हुन्छन्, त्यसको हिसाब नै छैन।
महिला सांसदको भेट गोप्य रहेन, त्यो खुलस्त भेट थियो। तर दूतावासमा पुगेर महिला सांसदहरूको हुलले राजदूत भेट्ने कुरा एउटा सार्वभौम देशका लागि कति शोभायमान हो? खेर, ती सांसदका लागि तर्क गर्न सजिलो छ- पार्टीका प्रमुख, ठूला नेता र मन्त्रीहरूले भेट गर्न हुने, हामीले गर्न नहुने? लु भैगो सांसदहरूको भेटलाई ठूलाबडाकै सिको मानौँ।
यहाँ कूटनीतिक भेट गर्नै नहुने भन्ने जिकिर गर्न खोजेको होइन। तर भेट्न दूतावास नै पुग्नु पर्ने किन? भेटको कारण र त्यसले देशका लागि दिने परिणाम के? यस्ता प्रश्नको जवाफ सचेत नागरिकले खोज्नै पर्छ। जनप्रतिनिधि र नेताहरूले जे गरेपनि नागरिकहरूले सहजै पचाउने र प्रश्न नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यो डरलाग्दो कुरा हो।